UCristina Neagu wahlinzwa futhi wathola ukuthi wayekude kangakanani nensimu | 1xbet
Umdlali ovelele kwi-European Handball Championship eSerbia, uKatarina Bulatovic, uzolinda kuze kuphele isizini ukuthi axoxe ngokushiya kwakhe u-Oltchim Râmnicu Vâlcea.
I-SportConcept, inkampani ephethe ezemidlalo umele, umemezele ukuthi kuphela ngemuva kokuphela kwemidlalo yeChampions League lapho ezoqala khona ukuxoxisana namanye amakilabhu, ngoba, okwamanje, ufuna ukugxila ebholeni lesandla kuphela, njengoba iMediafax yazisa.
Lesi sikhundla kuza ngemuva kokuthi uBulatovic esho ngesonto eledlule ukuthi uxoxisana namaqembu amaningana, kodwa ukhetho lokuqala olwe-Oltchim. Amathegi: oltchim ramnicu valcea, montenegro, i-handball, iligi yoshampeni, i-handball yabesifazane, i-katarina bulatovic, i-bulatovici
​​Umdlalo ubalwe esigabeni sokuqala se-EHF Cup, owaseRomania kungumshayimagoli ophambili weqembu. Ngesikhathi eneminyaka engu-28, wathuthela ePoland ehlobo lika-2012, ngemuva kokudlalela iHC Minaur Baia Mare, iDinamo, iPick Szeged, UCM Resita, U.UCluj Napoca no-HCM Constanța.
NakwiNdebe ye-EHF, u-ţtiinăa Bacău, iqembu eliqeqeshwa ngu-Eliodor Voica, uhlulwe emdlalweni wokuqala, ngo-18-21 phambi kweFrance usuka eNantes.
Amathegi: indebe ehf, ghionea, valentin ghionea, ghionea cupa ehf, ghionea hcm, elverum, wisla plock
UCristina Neagu unethemba d Uhlinzwe emlenzeni, okuzomgcina esebhaleni okungenani izinyanga eziyisithupha. “Ngingabuyela emandleni ami wonke,” kuthembisa umdlali ovelele emhlabeni kusukela ngo-2010.
UCristina Neagu ubuyile evela eBelgium.Umdlali we-Oltchim, owahlushwa umlenze wesiphambano emlenzeni wakhe wesobunxele, wahlinzwa emtholampilo kadokotela odumile uMarc Martens. Umdlali we-handball ohamba phambili emhlabeni ngo-2010 umemezela ukuthi uzobe engekho enkundleni okungenani izinyanga eziyisithupha.
UCristina Neagu wayesanda kubuyela enkundleni ngemuva kwekhefu lonyaka nezinyanga eziyisishiyagalombili, okwabangelwa ukuhlinzwa ehlombe.